VaChiwenga Vanonzi Havasi Kufarira Hurumende yeMubatanidzwa
Kubvumbi 10, 2009
Nyaya yekunetsana muhurumende yemubatanidzwa iri kuenderera mberi sezvo paine vamwe vari kunzi vari kuomesa musoro vachida kuondonga hurumende yemubatanidzwa.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vanhu ava vakatoumba kare chikwata chinonzi Social Revolutionary Council, icho chine nhengo dzakawanda dzange dziri muJoint Operation Command.
Nhengo idzi dzinonzi dzinosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri wemauto emuchadenga, VaPerence Shiri, pamwe nemutungamiri wemubatanidzwa wemauto, VaConstantine Chiwenga.
Studio7 haina kukwanisa kutaura naVaMnangagwa, VaShiri naVaChiwenga. NeChina, gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika muhofisi yemutungamiri, VaDidymus Mutasa, vakaramba kutaura neStudio7 nezvenyaya iyi.
Asi bepanhau reNew York Times rinotiwo vanhu ava havana kugadzirika muhana uye vari kuda kuti vakanganwirwe mhosva dzavakapara kubva kuma1980 kuMatebeleland munguva yegukurahundi, uye dzekuponda vanhu munguva dzesarudzo muna 2000, 2002 na2005 uye gore rapera.
VaMutasa vanonzi vakaudza bepanhau reNew York Times kuti ichokwadi kuti pane vamwe vakuru muZanu-PF vari kuda kuti vakanganwirwe mhosva dzavakapara.
Asi Chief Whip veZanu-PF mudare reparamende yepasi kana kuti House Of Assembly, VaJoram Gumbo, vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti zvekuti pane vanhu vari kuda kuvhiringidza hurumende yemabutanidzwa ndezvemugotsi matsuro.
VaGlen Mpani, avo vanoshanda nesangano reCenter for the Study of Violence and Reconciliation muCape Town, kuSouth Africa, vanoti nyaya yekuti vanhu vanhu vakapara mhosva varegererwe, inofanira kuzeyiwa nevanhu vose.
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinotiwo vanhu vose vakapara mhosva vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nemhosva dzavari kupomerwa.
Studio7 haina kukwanisa kutaura nemakurukota maviri ezvemukati menyika, VaKembo Mohadi naVaGiles Mutsekwa. Asi vachipindura mibvunzo muparamende, VaMutsekwa vakati vose vakapara mhosva vachamidwa pamberi pematare edzimhosva.